Yiziphi imithetho emisha ezidlulisela ukuhlolwa e amaphoyisa? udaba olufanele futhi baqonde izinto ezenzekayo ohlupha bonke abantu abafuna babe abashayeli bese uthola isitifiketi eside elindelwe ilungelo ukushayela. Kodwa sonke siyazi mathupha ukuthi kudlule okokuqala zonke izivivinyo (ikakhulukazi ukushayela emzini) kuyinto cishe ayinakwenzeka. Ngakho, kubalulekile ukuchaza kabanzi ngalesi sihloko.
Kusukela 2014 (ukuba ngqo, kusukela ngoNovemba 5) imithetho emisha ngokubeka ukuhlolwa kuleli amaphoyisa omgwaqo. Iziphi izinguquko Kwenziwa umthetho? Empeleni kukhona okuningi.
Ngakho, ekuqaleni, manje noma yimuphi umuntu omdala kungaba aphumelele ekuhlolweni (kokubili theory kanye nama-practical ukushayela wesifunda) kunoma iyiphi idolobha. Akunandaba kulokho esifundeni. Ukuze wenze lokhu, kumele ufake isicelo kunoma Russian amaphoyisa omgwaqo iyunithi othola izivivinyo.
Eyesibili ushintsho - manje isakhamuzi, owayefundelwa waqasha imoto nge "umshini okuzenzakalelayo" ayinalo ilungelo ukushayela imoto nge "Mechanics". Kuphela uma ke ungadluli ukuhlolwa ezifanele. Elinye iphuzu - Thatha kulabo abantu ababengakwazi ukuhlula ukuhlolwa ne lokuqala kathathu, etholakalayo okungenani izinsuku ezingu-30 kuphela. Kodwa eqinisweni, kufanele ulinde isikhathi eside. Ngoba manje amaphoyisa omgwaqo kudala kakhulu uhlu ukulinda, futhi bonke ababethi kusengaphambili. Ukuhlolisisa Imiphumela theory zigcinwa izinyanga eziyisithupha.
Enye imithetho emisha ukuthatha izivivinyo esikhathini amaphoyisa omgwaqo ukuthi manje bedonsa can kuphela abahloli engaphezu kwengu-25, kanye nemfundo ephakeme amalungelo esigabeni abafanele. Experience lokushayela kwabo okuwusizo kufanele kube okungenani iminyaka emihlanu.
Ngisho okubizwa ngokuthi self-ukuqeqeshwa sahoxiswa. Manje wonke umuntu ufuna ukuba abe umshayeli ubophekile ukuba bahlukane nakho esikoleni ukushayela. Enye ukuhlolwa zingafundwa kokubili automatic transmission futhi ukudluliswa mathupha. Kungcono Yiqiniso, ukhetho lwesibili. Abaningi hard drive kwi "Mechanics", kodwa ke phezu "umshini" - elula. Yebo, futhi akudingeki ukuba sithathe imoto nge ukudluliswa ngezandla kuphela.
Ubudala imikhawulo nokusebenzisa
Enye imithetho emisha ngokubeka ukuhlolwa kuleli amaphoyisa omgwaqo ukuthi kusukela manje kuqhubeke ungafaka isicelo ngekhompyutha. Ukuze wenze lokhu, ukudala portal eyodwa kwemisebenzi yomphakathi. Futhi uma ufuna kudlule ukuhlolwa umuntu zikhutshaziwe, kuzothatha kuphela imoto wahlomisa ngokukhethekile. Zonke kufanele uhambisane nemithetho yezempilo.
Futhi ekugcineni, ushintsho eyodwa ngaphezulu, aqukethe imithetho emisha ngokulungiselela uhlolo ku omgwaqo. Kusukela manje ngakwesokudla bangathola futhi oneminyaka engu-16 ubudala. Kodwa intsha engaphansi kwengu-18, kuyodingeka uthumele lesi sivumelwano ebhaliwe ngabazali noma abalondolozi.
Kwakukhona imithetho entsha izivivinyo esikhathini amaphoyisa omgwaqo, kodwa izimfuneko imibhalo ziyafana. Ukuze uthole ilungelo, kufanele ukuqoqa ezinye amaphepha. Okokuqala, it is a isitatimende. Kunikezwe noma ngendlela kagesi noma mathupha. Esesibili - passport. Futhi, incwadi kadokotela isampula esungulwe, futhi isitifiketi beqeda isikole ukushayela. Futhi, njengoba kushiwo ngenhla, uma ikhandidethi abashayeli kweminyaka engu-18, udinga ukuqinisekiswa kubazali babo.
Irisidi sekukhokhelwa Imali yokubhalisa ukwethula akudingekile. Lokhu kuyadingeka ke - ngemuva kokuphumelela konke izivivinyo ezintathu. Kodwa lapho imibhalo kuzoxoxwa, sizokwazi ukwenza umsebenzi oyinhloko. Okungukuthi sokunikela izivivinyo eziyihlazo.
Ngakho, ngingachaza okuthile. Kwenzeka ukuthi abafundi ungadluli okokuqala, kodwa THATHA ezikoleni ukushayela ngeke ngokushesha. Yayichaza zonke emigqeni omkhulu. THATHA ngempela ngesineke amasonto (ngisho izinyanga) kusengaphambili. Ngenxa yokuthi abaningi, ngakho musa ukulinda, thatha imibhalo bese unquma ukuthatha kwelinye idolobha. Kodwa imithetho emisha ukuthatha izivivinyo esikhathini amaphoyisa omgwaqo (e Russian Federation) baye some. Manje, abafundela Abashayeli abakwazi ukukwenza ngokwakho. Bona bakudinga ngempela lihunyushelwe wendawo Isikole esifundisa ukushayela zigunyazwe ohlwini. Ezimweni eziningi, lokhu ngeke khulula ukwenza. Kodwa izindleko kuyadingeka ukuze ixoxe Umqondisi wesikole esithile ukushayela.
Ukuze kuxazululwe le nkinga kubalulekile emva imibhalo isheke omgwaqo. Ngokuvamile kuthatha cishe inyanga. Ngenxa amaphoyisa omgwaqo lendawo kumele uthumela isicelo edolobheni lapho afundela ikhandidethi abashayeli - ukuhlola noma cha yena lapho lathola isitifiketi zokuba umuntu aqeqeshelwe amakhono.
Lapho yonke imibuzo nge ukucutshungulwa kwemibhalo in the SAI kanye ahamba aya kulesinye sikolo ukushayela ziyoxazululwa, thina kuphela silinde usuku. Yiqiniso, uma lo muzi yomfokazi, mhlawumbe okungenani izikhathi ezimbalwa ukuze ukugibela umzila, ukuqasha umuntu ozongifundisa kusukela efanayo ukushayela esikoleni. Kusadingeka ukujwayela imoto futhi simazi kangcono endleleni wendawo.
Futhi-ke, kubalulekile ukuba baphindaphinde imithetho. imithetho okusha ngokulungiselela uhlolo ku amaphoyisa omgwaqo e-Russia isimo ukuthi ukuhlolwa theory, ungakwazi thatha futhi bamba futhi zonke izinsuku ezingu-7. Ngaphambili, igebe kwaba ezingu-3. Ngakho-ke, ukuze singalahlekelwa isikhathi esiningi, kungcono ukuchitha izinsukwana ukuphinda futhi bekrema theory. Noma kunjalo, le nto ilungile, lawa amakhono eziyosisiza practice.
Ngasekuqaleni kwalo nyaka, kwaba khona amahemuhemu ukuthi amaphoyisa omgwaqo ukwamukele imithetho emisha ye ekutholeni ilayisensi yokushayela eRussia. Futhi, ngokufanele, izivivinyo - kanye. Ikakhulukazi "mnandi" izindaba wawuqhele cishe luhlolo theory. Lathi esikhathini esizayo esiseduze uzoqala ukwenza ezimweni entsha. Lokho okuthiwa khansela ezimbili iphutha. Futhi uma ngaphambili kwakunokwenzeka ukwenza usula ezimbili bese uphendula imibuzo 18 20, manje kufanele yonke imibuzo ekuhlolweni ukunikeza izimpendulo ezifanele. Kuyinto cishe kungenakwenzeka. konke kuphela uma ungenawo ngekhanda uphelele.
It ziqondiswe izihloko eziningana ngemcondvo. Lawa amalungiselelo eziyisisekelo mayelana imoto yokwemukela msebenzi. Russia futhi yinto evamile ukukhuluma imithetho ezokuphepha emgwaqeni. Futhi-ke, izinhlinzeko zoMthetho necala lobugebengu, tekuphatsa kanye civil abashayeli. Yiqiniso, ngemcondvo kufakwe izisekelo lokulawula ephephile umshini kanye imithi, okungukuthi, imibuzo mayelana nendlela yokuthatha isinyathelo lapho ekuhlinzekeni usizo lokuqala kuya izisulu kule ngozi.
Sekukonke kukhona amathikithi amane. Futhi ngamunye - imibuzo 20. Ubude 800. Kunconywa kuqala ukufunda incwadi nemithetho, bese benika uthisha "Marathon-800", okungukuthi, yonke imibuzo ilandelana, kodwa ezixutshanisiwe.
Futhi kuthiwani-ke le ngxenye ukuhlolwa enikeziwe imithetho emisha? Inqubo ukuhlolwa kuleli amaphoyisa omgwaqo kuzwakele kubo bonke: kuqala theory ke - race ithrekhi, kanti owokugcina uyoba ngo - dolobha. Ngakho, esakhiweni: give up zici ezintathu. Zonke eziyisihlanu kuzo. Okokuqala - a trestle (kumelwe ukudonsa kwabhoboka yokupaka kuyanda), owesibili - parallel yokupaka, eyesithathu - inyoka, sesine - Ukubuyiselwa emuva ngezinyathelo ezintathu, futhi lesihlanu - ukufika ukulondoloza phakathi egalaji. Akubona bonke izakhi ilula. Othile kukhona izinkinga yokupaka (kubhekwe siyisinqumo esinzima kunazo zonke), abanye - ne stop egalaji.
Ngokuvamile, lapho umshayeli ikhandidethi uthola beshayela, akazi ukuthi wayezobhekana ukwenza namuhla. Umhloli ngokwakhe ezashiwo inkomba. Ngokwesibonelo, the yokubeka kuqala. Akhethwe lapho zibhekene nomsebenzi, umhloli kwenza inothi kucecevu luhlolo kanye esabela into elandelayo. Prakthiza libonisa ukuthi saziso emamaki inyoka futhi Pier. Kodwa isici sesithathu - imfihlakalo. Ngokuvamile, yebo, iyona yokupaka okufanayo, ngoba ubhekwa siyisinqumo esinzima kunazo zonke. Okungenani - ukusakaza ngezigaba ezintathu. Ngokuvamile, udinga ukuba balungele yini.
Ukukhuluma ngalokho imithetho entsha ukuhlolwa ngakwesokudla amaphoyisa womgwaqo, kufanele ukunakwa kanti eyesithathu kuqashelwe, esigabeni yokugcina, okuyinto ukuya ngamunye kulabo abazobhapathizwa, umshayeli endleleni eya isitifiketi eside elindelwe.
City - siyisinqumo esinzima kunazo zonke. Ngoba umuntu walahlekelwa akhohlwe konke ayengakwenza. Ezinye babejabule kakhulu futhi ayikwazi ukugxila. Abanye basuke nje ukwesaba umhloli. Futhi ziningi ezinye izizathu. Kodwa uma ufuna kudlule okokuqala, ubhekana nabo bonke ngayo yonke. Thina okukhulunywe ngaye ekuqaleni ngalokho imithetho emisha kwezidingo / thatha futhi bamba futhi ukuhlolwa ngakwesokudla ku omgwaqo. Futhi kwakuthiwa ukulinda okwamanje isikhathi eside. Ukuze ugweme ukulahlekelwa imali ku lokufundiswa futhi, okubaluleke kakhulu, imizwa, kubalulekile ukuqoqa futhi ukuletha ngqo.
Ubude kungenzeka amaphuzu 4 amaphuzu amaphutha kuleli cala kuzoxoxwa ukuthi umuntu isidlulile isivivinyo. Kodwa uma uhola 5, kukubi kakhulu. Mina akaphindange waphutha abahamba ngezinyawo? Hhayi lidlule. Ngashiya ku esiphikisayo? Futhi hhayi lidlule. Awela esiqinile double? Futhi! Noma mhlawumbe ke eyayipakwe endaweni engafanele? Ngokwemvelo, liphinde 5 amaphuzu futhi osilenny "idolobha". imithetho okusha ngokulungiselela uhlolo ku amaphoyisa omgwaqo ukuthola amalungelo inzima kakhulu. Eqinisweni, akukho nesilinganiso yephutha. Kubalulekile ukukhumbula lokhu.
Yizinto ezincane kungonakalisa konke
New imithetho ukuhlolwa kuleli amaphoyisa omgwaqo kulemikhakha esiqinile. Amaphuzu kungenziwa kwaqashwa nganoma yini. Hhayi abethela ibhande - lokususa amaphuzu. Ingabe okungazelele isignali vula noma ukuvala? isikolo kakhulu ezimbi. Ngakhetha ijubane okungalungile (kakhulu eliphezulu kakhulu noma eliphansi kakhulu)? Enye lokususa iphuzu. Mina braked? Kakhulu. Angazi zisebenzisa nesibuko? Futhi emalini amaphuzu. Ikakhulukazi eziningi kusetshenziswa zokugcina. Ngingayithola kanjani ukufakazela ukuthi umhloli ukuthi usebenzise nesibuko? Phela, uma ayecabanga ukuthi lesi simo senzeka awuzange uhlangane. Ngakho-ke kungcono ukuthi ujikise ikhanda lakhe ngokweyisa, hhayi nje ukuhumusha umbono. Futhi by the way, uma ikhandidethi ngesikhathi ukulethwa wenza ukwephula ngenhla, konke, it is ethunyelwe resit. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi bebuthene izinto kancane! Kodwa konke lokhu kuyinto yisigwebo. Kumele sikhumbule caveat.
Ngo-August 11, 2014 emthethweni aye wenza izinguquko ezithile ngokuphathelene iprogramme ukhetho abashayeli. Okokuqala, some izimfuneko izikole ukushayela. Ngasinye kufanele sibe isikhala ayo, ezinhle, imishini nolungenakunyakaziswa nothisha abaqeqeshiwe.
Futhi ekufundeni phathelana ngisho zihlanganisa amamojuli ezimbili. Eyokuqala - base. Kumelwe kudlule bonke abantu, okokuqala uthola ilungelo. Block sithatha amahora 84. Sifunda konke: imithetho yomgwaqo, izisekelo zempilo, ngokwengqondo, izimo komgwaqo, abahamba ngezinyawo, bese kanjani ukubhekana nazo. Plus, yebo, ukushayela esisebenzayo.
module okhethekile abantu asebavele izincwadi zokushayela, kodwa abafisa ukuthola isigaba ezahlukene. Khona-ke ikhandidethi aqeqeshelwa sebhithi abayikhethile. Ngokwesibonelo, uma unalo isigaba ilayisensi "B" (izimoto ezithwala), kodwa idinga indawo "C" (amaloli), uyokuzwa ukushayela ne TC futhi ukuthuthukisa imithetho efanayo.
ilayisensi International yokushayela
Ngakho, kubalulekile ukuba ezicezile izivivinyo sihloko bese uthinta ku ukuthola amalungelo omhlaba. Ukumbamba kubo, kubalulekile ukubonisa ku SAI isicelo olufanele, iphasipoti kazwelonke kanye nesitifiketi wezokwelapha. Okulandelayo - ilayisensi futhi siqu izithombe Russian yokushayela ezithathwe matte iphepha. Ingabe ngidinga isithombe esisodwa, kodwa kungcono ukuletha ambalwa. ngefomethi yawo - 35 x 45 mm. Ngaphansi imithetho emisha, isitifiketi international zinganikwa ku noma ubani Russian. Ngokwemvelo, ngaphandle kokuthatha izivivinyo. Ziyakwazi ezizwakalayo zokuba esiphezulu iminyaka emithathu. Nokho, uma ngesikhathi lapho umuntu senziwe, amalungelo Russian wahlala evumelekile ngisho, isibonelo, ezingu-12, kanye nasezingeni lamazwe omhlaba kuyodingeka okufanayo usuku lokuphelelwa isikhathi.
Ngokuvamile, isihloko sale enemininingwane futhi ezibalulekile. Njalo ngonyaka izinguquko okuthile futhi wenze ezinye ezintsha. Kwakuthiwa nhlobo Ufuna ukuqala lokukhipha ilayisense lwesikhashana - onyakeni wokuqala, bese esikhathini eside, kodwa kuphela uma umuntu ngaphandle kokushiya izinhlawulo yakhe nokuphulwa komthetho. Nakuba izimo sokulungiselela yabo Kuyokwenziwa okufanayo. Kodwa kuze kube manje, ngenhlanhla, ukwamukelwa kwenkolelo-mthetho Angizwa lutho, ukuze ukwazi ukuhlala ngizolile. Kodwa usathola kuwufanele ilungelo ngokushesha.
Izinyoka Primorye Territory: Uhlolojikelele, incazelo izinhlobo kanye nezici
"Deepa": yokusetshenziswa, real analogue, izithombe
Medicine "Immard": yokusetshenziswa, ukwakheka, analogue